KaRa ရဲ့ MBC Music Core က Goodbye Stage ပါ။ ဒီ Stage ရဲ့ Idea ကို တော်တော်သဘောကျပါတယ်။ Butt Dance ကတဲ့ အချိန်မှာ မီးတွေ မှိတ်သွားပြီး ဘောင်းဘီ က လင်းနေတာ အရမ်းမိုက်တယ်။ So Cool!!
Video Credits: xPlasticLittle
Posted by Wai Lwin Zaw at 8:50 PM0comments
2NE1 က Park Bom ရဲ့ You & I ပါ။ Single ထွက်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ Music Charts တွေမှာ SHINee နဲ့ SS501 တို့ကို ကျော်တက်ပြီး No.1 ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းရဲ့ Producer ကတော့ YG ရဲ့ Music Producer Teddy ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 2NE1 ရဲ့ Fire, I don't Care၊ Big Bang နဲ့ 2NE1 ရဲ့ Lollipop၊ Uhm Jung Hwa ရဲ့ D.I.S.C.O, DJ၊ Tae Yang ရဲ့ Look Only At Me စတဲ့ သီချင်းတွေဟာ Teddy produce လုပ်ခဲ့တဲ့ Hit Songs တွေပါ။
Download Park Bom - You And I
Video Credits: UrAsianSource
Posted by Wai Lwin Zaw at 9:13 PM0comments
Loner - Outsider
အခုတစ်လော နားထောင်ဖြစ်တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ Outsider က Twist ဆိုတာအရမ်းကောင်းတဲ့ Rapper တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကို Korea ရဲ့ အမြန်ဆုံး Rapper လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီ Loner ဆိုတဲ့ သီချင်း က သူ့ရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတာလို့ သိရပါတယ်။
Video Credits: tvxq1004012
Posted by Wai Lwin Zaw at 8:57 PM0comments
Mighty Mouth ရဲ့ Album အသစ်ထဲကပါ။ First Album မှာ Yoon Eun Hye, Son Dambi စတဲ့ နာမည်ကြီး တွေ Featuring ဆို ပေးခဲ့သလို အခုလည်း Han Ye Seul က Featuring ဆိုပေးထားပါတယ်။ MV မှာတော့ Uee(After School) နဲ့ Hyun Ah(4minute) တို့က သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။
Love Class MV - Might Mouth feat Han Ye Seul starring Uee & Hyun Ah
Love Class - Might Mouth feat Uee(After School)
Love Class - Might Mouth feat Hyun Ah(4minute)
Love Class - Might Mouth feat Nicole(Kara)
Which version is the best? What do you think? For me, I like Nicole's version. :D
Video Credits: KPOPMV010, CodeMonmonSeason3, karathe1004s, Bou819
Labels:4minute, After School, Han Ye Seul, Kara, Mighty Mouth
Posted by Wai Lwin Zaw at 7:23 AM0comments
Big Bang အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် G-Dragon ရဲ့ ပထမဆုံး Single Album ပါ။ ဒီ Album ထဲမှာ 1TYM အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Teddy, 2NE1 အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် CL တို့နဲ့ တွဲဆိုထားတဲ့ The Leaders ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
Download - Heartbreaker Album
Labels: 1 TYM, 2NE1, Big Bang, CL, G-Dragon, Teddy
Posted by Wai Lwin Zaw at 7:06 AM0comments
Blog စရေးတုန်းကတော့ ဘာရေးလို့ရေးရမှန်းမသိဘူး။ ခုတော့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ K-pop ပဲရေးတော့မယ်လို့။ ကိုယ်က ဒါပဲကျွမ်းတာကိုး။ :D (မနော် တို့လို ကဗျာတွေ စာတွေမှမရေးတတ်တာ။ သူများရေးတာပဲ လိုက်ဖတ်တတ်တယ်။) ဒီ Blog မှာတော့ K-Pop Industry က Pop Group တွေရဲ့ Update News တွေ (Profile တွေနဲ့ သီချင်းတွေကိုလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း) တင်ပေးသွားပါမယ်။ လိုချင်တဲ့ သီချင်းရှိရင်လည်း C-Box မှာ တောင်းခဲ့နိုင်ပါတယ်။
Wai Lwin Zaw
I amagirl who likes k-pop & dramas..
1 TYM (2)
CSJH The Grace (2)
Old School K-pop (1)
Free Blogspot Templates by Isnaini Dot Com and Exotic Car Pictures.